Chinese Yiling chipatara ndiyo inonyanya pamwero China muwadhi woga zvetsika Chinese mushonga. The simba Nyanzvi chikwata muchipatara rinoumbwa 29 academicians of Chinese Academy of Sciences uye doctorate uye nyanzvi mhiri kwemakungwa kudzoka. Tikafunga Chinese uye Western kurapa ane rakasiyana kurapwa nzira uye dzokurapwa migumisiro nokuda pakurapa siyana zvakafanana zvirwere, chisingaperi zvirwere uye kwazvo zvirwere.
Kunyanya kiyi unyanzvi pakati China uye Hebei Province, akadai tsandanyama atrophy dhipatimendi, rheumatic dhipatimendi chirwere, chirwere cheshuga dhipatimendi, nephrotic dhipatimendi, bundu dhipatimendi nezvimwe madhipatimendi, Mabatirwo musana tsandanyama atrophy, gwenya dzouropi chirwere, scleroderma, fibromyalgia, rheumatism, chirwere cheshuga, cheitsvo, mhando dzose kenza uye zvimwe zvirwere zviri pachena.
Inoshanda kurapwa uye achibatsirwa varwere vatorwa kunyika dzinopfuura 20 uye kumatunhu munyika. Nokuti kurapa chirwere, henyu kutisiya mashoko kana kubata nenyanzvi.